WICShopper - Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (FAQs)
Oggol - Waxyaabahani waa WIC la oggol yahay. Waa hab fiican oo lagu ogaado in cuntada WIC la oggol yahay iyo in kale. Hal shay oo ah in la ogaado waa inaad arki kartaa shay la oggol yahay, laakiin kuma jirto faa'iidooyinkaaga cuntada ee WIC, marka ma iibsan kartid WIC. Ilaa faa iidooyinka WIC ay ku xirmaan barnaamijka WICShopper, farriintan "la oggol yahay" waxaa laga yaabaa inaan lagu dabakhin dheefaha qoyskaaga. Tusaale ahaan, cunug hal sano jir ah ayaa hela caano dhan. Haddii aadan ku haysan cunug hal sano jir ah qoyskaaga, caanaha oo dhan kama mid noqon doonaan faa'iidooyinkaaga cuntada ee WIC, mana awoodi doontid inaad ku iibsato caano dhan barta jeegga.
Ma aha wax WIC ah - Tan macnaheedu waa WIC ma aysan ansixin sheygan. Haddii aad u maleyneyso inaad awood u leedahay inaad ku iibsato cunnadan gargaarka cuntada ee WIC nala soo socodsii adigoo adeegsanaya "Tan ma iibsan karayn!" [HC (3] ku jirta barnaamijkan.
Lama ogaan karo - Tani waxay ka dhigan tahay in barnaamijka uusan akhrin karin barcode-ka. Haddii sabab kasta ha noqotee, ay ku adag tahay abku inuu akhriyo barcode waxaad heli doontaa farriintan. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa badhanka, Furaha gala UPC, ee App-ka si aad u gasho lambarka 12-lambar UPC ee ku hoos yaal barcode-ka.